Isizinda se-Ultrasonic sisodwa noma sihlangene nezinye izindlela zokukhipha ezifana ne-solvent extraction noma i-supercritical CO2 ama-extractor asetshenziswa ngempumelelo ukukhipha isibalo esigcwele sama-cannabinoids esitshalweni se-cannabis (i-hemp nensangu). Ensangu, indawo esemqoka ye-cannabinoid yi-Δ9-tetrahydro-cannabinol (Δ9-THC) nemiphumela yayo eyaziwayo ye-psychotropic. Amanye ama-cannabinoids abalulekile anomsebenzi omncane noma ongenawo nhlobo we-psychotropic angatholakala kuzo zombili, i-hemp nensangu, futhi afake i-cannabidiolic acid (i-CBDA), i-cannabidiol (i-CBD), i-cannabigerol (i-CBG), i-cannabichromene (i-CBC), i-cannabinol (i-CBN), ne-cannabicyclol ( CBL), kanye namanye ama-homologs ahlobene ne-C19.
I-Supertritical CO ethuthukisiwe ye-Ultrasonically2 Ukukhipha
Inhlanganisela yamandla aphezulu e-ultrasound kanye ne-supercritical fluid extractor (SFE) iyindlela esebenza kahle kakhulu futhi ehlanzekile yokusheshisa nokwenza ngcono izinqubo zokudlulisa ubukhulu. Ukudluliswa kweMisa phakathi kwento eluhlaza (isb., Ama-botanicals afana namaqabunga, izimbali, amahlumela njll) kanye ne-solvent (isb.2) yisici esinqunyelwe ngesikhathi senqubo yokukhipha. Ngenxa yokudluliswa kwesisindo esilinganiselwe, ukusebenza kahle kwesizinda kuncishisiwe. Ukunxephezela ukusebenza kahle okushodayo, noma ngabe isikhathi sokukhipha kufanele sikhishwe noma isivuno sokukhishwa kufanele sinikelwe.
I-high-power ultrasonication ubuchwepheshe obufakazelwe kahle bokuqinisa ukusabela okuhamba kancane ngokuthuthukisa ukudluliswa okukhulu phakathi kwezigaba. Ngokudlidlizela okukhulu, amandla okushefa, kanye nokuxokozela okuxokozelayo, amandla e-ultrasound adalula okokukhipha okuluhlaza ngesilinganiso esikhuphuke kakhulu kwi-solvent. Lokhu kubangela ukukhiqizwa okuphezulu kokukhipha kanye nesikhathi esincishisiwe sokukhipha. I-Ultrasonication ithuthukisa ukusebenza kahle kokukhipha kwanoma yiluphi uhlobo lwe-supercritical fluid extractor:
ngokunciphisa isikhathi sokukhipha
ngokunciphisa ingcindezi edingekayo
ngokwenza ngcono umthamo wokukhiqiza ophelele
I-UIP2000hdT Isikhombi se-ultrasonic singafakwa ku-CO ebukhali< sub> amakholomu okukhipha ukwenza ngcono ukudluliswa kwesisindo futhi ngaleyo ndlela kukhishwe isivuno
Ukuthuthukiswa kwe-Ultrasonic kokudluliswa kwabantu ngobuningi bezinqubo zokukhishwa kwe-CO2 kungabonakala kalula ngokusebenzisa iprosesa ephezulu yokusebenza njenge-Cascatrode ku-extractor fluid ephezulu. I-Hielscher Ultrasonics probes (eyaziwa nangokuthi izimpondo ze-ultrasonic, i-sonotrodes) ingaxhunywa ngokufakwa uphawu okujwayelekile kwe-flange futhi iyahambisana nezixhumi ze-swedge lock. Lokhu kwenza ukufakwa nokusebenza kube lula futhi kuphephe. Njengoba wonke ama-ultrasonicators ama-Hielscher aziwa ngokuqina nokusebenza kwawo okuqhubekayo, uhlelo olufakiwe kanye nolokugcinwa okuphansi.
Ukukhishwa Kwe-Ultrasonically Supercritical Fluid at Any Scale
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher nama-probes ayatholakala
ama-extractors amancane asetshenziswayo amancane / elebhu
Isikhombi se-Ultrasonic sisetshenziswe ohlelweni lwe-CO2 olunobuningi ukuthuthukisa ukudluliswa kwabantu abaningi. Lokhu kwandisa isivuno sesizinda futhi kunciphisa isikhathi sokukhipha kanye nokushisa.
isibalo nokutadisha: Hu et al. 2007
Icase Study ye-Ultrasonically Enhanced Supercritical CO2 Ukukhipha
Ukukhishwa kukajinja: UBalachandran et al. (2006) uphenye ukusebenza kahle kwesizinda se-CO2 esisetshenzisiwe nge-ultrasonically esebenzisa i-Hielscher I-ultrasonicator UIP500hdT. Bafundile ithonya le-ultrasound ekukhishweni okubucayi besebenzisa ujinja omisiwe. "Isivuno sezakhi ezi-pungent ezivela ku-ginger sikhuphuke kakhulu ngaphansi kwethonya le-ultrasound, ngokuthuthuka okufika kuma-30% ngasekupheleni kwesikhathi sokukhishwa." (UBalachandran et al. 2006)
Funda kabanzi mayelana nesizinda se-ginger se-ultrasonic!
Izithombe ze-FESEM zezinhlayiya ze-ginger. (A) Ukuhlolwa ngaphandle kwe-sonication, (B) ukuhlolwa kwe-sonication usebenzisa i- UIP500hdT .
Isithombe nokutadisha: UBalachandran et al. 2006
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angakwazi
qinisa ukudluliswa okukhulu ngesikhathi se-SFE
ukwandisa isivuno sokukhipha
shesha ukukhishwa kwe-SFE
phatha kalula izingcindezi eziphakeme
phatha izinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene
ifakwe kabusha kuzinhlelo ezikhona ze-SFE
Ama-High-Power Ultrasonic Extractors Wokukhipha Okunamandla Okunamandla
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angenziwa kalula kunoma iyiphi i-CO ejwayelekile yokuhlola2 extractor ukuze kuthuthukiswe ukudluliswa kwabantu abaningi ngaleyo ndlela kwandise isivuno sesizinda.
Ama-probe e-ultrasonic we cascatrodeTM type zilungele ikakhulukazi ukuhlanganiswa kube yi-CO2 i-extractor, ngoba i-Hielscher cascatrode inikela ngendawo ephezulu, ekhipha i-cavitation eqinile kumathangi amakhulu we-CO2 izinhlelo zokukhipha futhi ngaleyo ndlela zingacubungula amanani amakhulu kalula. I-Hielscher Ultrasonics’ Amaprosesa asezimboni aqinile futhi anokwethenjelwa angaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes afika ku-200µm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ngokuqhubekayo ekusebenzeni okungama-24/7. Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ukusebenza okuthembekile okuqhubekayo kwama-amplitudes aphakeme kanye nokuqina nokugcinwa okuphansi kwe-Hielscher ultrasonic extractors kubenza kube yimishini ekahle yokuqalisa ku-R&D kanye ne-supercritical / subcritical CO2 abakhiqizi.
Izinzuzo ze-Hielscher Ultrasonic Systems:
ukusebenza okuqhubekayo okuphezulu
isilawuli kude sesiphequluli
10 kuya ku-2000mL 20 kuya ku-400mL / min UP200St, UP400St
0.1 kuye ku-8L 0.2 kuya ku-2L / iminithi UIP500hdT